JINGHPAW KASA: THANLWIN AYER COMPANY A YAM NI HPE MYEN HPYEN NI JAHTEN KAU
THANLWIN AYER COMPANY A YAM NI HPE MYEN HPYEN NI JAHTEN KAU
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) Up Hkang Ginra rai nga ai Uru Seng Maw Hpakant Ginra de Lai wa sai 2-3 ya laman hta, Hpa Pyin hte Mana lapran na Thanlwin Ayer (သံလွင်ဧရာ) ngu ai Co.Ltd kaw wa rawng nga ai Myen hpyen ni gaw, Seng Ja Bum na (ဝေအောင်) Company kaw na Bawmyam kapaw wa ai zawn bai n byin na matu, Thanlwin Ayer (သံလွင်ဧရာ) ni htun da ai Bawm-yam Mun, Sen lam hte mari bang da ai Bawmyam ni hpe hka hte agre jahkrat shayawng kau dat ma ai majaw, Company lawu mayan hku nan nam tsing ni yawng hkyeng mat nna hkraw si mat ai lam shiga na chye lu ai. Company shawng hku nna lai sa lai wa mung shawa masha ni hpe mung shani shagu rim jep san nga ma ai lam buga masha ni kawn na chye lu ai.
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ဘက်တိုင်း တပ်မဟာ (၆) နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ ဖားပင်နှင့်မနားမော်ကြားရှိ သံလွင်ဧရာကုမ္မဏီ၏ ယမ်းဂိုဒေါင်မှ ယမ်းများကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်၊ သုံးရက်ခန့်တွင် ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များမှ လွန်ခဲ့သောလက ဆိုင်းဂျာဘွမ်ရှိ ဝေအောင်ကုမ္မဏီကဲ့သို့ ပြန်လည်ပေါက်ကွဲလာမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် အားလုံး ရေဖျော်ပြီးမျောလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ ယမ်းများကို စည်းမရှိကမ်းမရှိ ရေဖျော်မျောလိုက်သော ကြောင့် ပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြက်ခင်း၊ သစ်ပင်များအားလုံး ခြောက်သွေ့ကာ သေးဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ပြည်သူများကိုလည်း ဗမာအစိုးရစစ်သားများမှ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဖမ်းဆီး ခြိမ်းခြောက်နေလျက်ရှိကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံများမှ တဆင့် ကြားသိရပါသည်။
bawm yam htun da ai nnga jang mung wan sau bung ni shadun da ai shara de gap bang dat jang yawng bai hkru wa na re